Maalinta: 2 December 2019
Antalya 3. Waddooyinku waxay bilaabeen jiifinta Qadka Nidaamka Tareenka Marxaladda; Antalya Metropolitan Municipal 3. Hawlaha khadka khadka tareenka ee Etap waxay ku socdaan xawaare buuxa. Qadka baska ee u dhexeeya boosteejada baska iyo Jaamacadda Meltem ee Akdeniz University [More ...]
Diyaaradda Turkish Airlines Dreamliner ee Fasallada Ganacsiga Cusub; Boeing 787-9 oo leh noocyo dhaadheer, mashiin mataan ah iyo jir ballaaran ayaa sidoo kale loo yaqaanaa Dreamliner. Qoyaan aad u badan [More ...]
Codsiga cusub ee dawlada hoose ee Izmir Metropolitan District, waxaad awoodi doontaa inaad ku raacdo basaska dowlada hoose oo wata baaskiil isku laabma waqtiyo go'an. Dawlada Hoose ee Magaaladda ayaa saxeexday mashruucyo muhiim ah si İzmir looga dhigo "magaalada baaskiilka,. [More ...]
Khudbadiisa kadib “Khudbaddii Dhulgariirka İ, Madaxweynaha IMM-da Ekrem İmamoğlu wuxuu kaga jawaabay su’aalaha suxufiyiinta. Imamoglu, Wasiirka Arimaha Dibadda Mevlut Cavusoglu'nun "Channel Istanbul, isaga oo tixraacaya" qodida daqiiqada aan ku dhufanay badda ayaa duuli doona, "ayuu ku jawaabay. Dadka reer Istanbul [More ...]
Isgaarsiinta khadka Tecer-Karagöl-Kangal, Calaamadda, Tamarta iyo Rakibaadda Fiber Optic Rakibaadayaasha iyo Nidaamyada Gudbinta Tilmaanta Tender Result Xender2019 / 469865 GCC waxay xaddideysaa qiimaha 14.233.356,92 TL iyo ugu dhowaan. [More ...]
Jimicsiga ESHOT wuxuu ka helayaa Shahaadooyin Buuxa khubaradan; Agaasinka Guud ee ESHOT Gediz Dayactirka culus ee Xarumaha dhulgariirka iyo qulqulatooyinka dabka waxay ahaayeen daqiiqado xiiso badan. Agaasinka Guud ee Degmooyinka Izmir ESHOT, sida sharciga uu qabo si joogto ah [More ...]